Nwere ike ị nweta nnukwu ụkwụ n’ịgba ịnyịnya ígwè? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Kekwụ ụkwụ - ihe ngwọta na-eme ihe
Nwere ike ị nweta nnukwu ụkwụ n’ịgba ịnyịnya ígwè?
Azịza dị mkpirikpi maka ma ọ bụịgba ígwèna-agaimenke giụkwụ ukwubụ - mba. N'ezie,ịgba ígwèmma gịụkwụakwara, ma dị ka mmega ahụ nke ikuku, ọ na-arụ ọrụ ntachi obi gị, na-eme ka ha sie ike na ike ọgwụgwụ mgbe ị na-azụ ọzụzụ, mana ọ gaghị eme ka ha buru ibu.Jun 21, 2018
N’isiokwu a anyị na-egosi ndị nọ n’afọ iri na ụma nnukwu ụzọ iji melite ike ha n’elu igwe kwụ otu ebe. Anyị niile chọrọ ịdị ike, mana gịnị ka nke ahụ pụtara nke ọma? Nkọwapụta teknụzụ nke ike bụ ike gị ịrụ ọrụ megide nguzogide ahụ, ike bụ ikike kachasị anyị na-emegide ha nwere ike itinye ibu na nke anyị na-enye site na pedal anyị, anyị nwere ike igosipụta iji meziwanye ike anyị site na ịbawanye nguzogide anyị bụ na-arụ ọrụ megide mana olee otu nke ahụ si enyere anyị aka nke ọma na igwe kwụ otu ebe ọ bụ maka iwelie ikike gị ịnagide ọnọdụ ebe ịchọrọ ike ọzọ, dị ka mpụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ịgba ọsọ, ma ọ bụ ọbụlagodi na ọfụma ya kachasị mkpa site n'akụkụ, na nke ahụ n'uche anyị ga-elekwasị anya na itinyekwu ike na ya Pedaling karịa ka a ga-achọrọ maka oge nke njem, mana maka oge dị mkpirikpi n'ụzọ dị otu a Na etiti oge, dịka ọ dị mgbe ahụ ziri ezi, ọ ga-afụ ụfụ, mana O di nwute! anyị ebe a dị n'ime nwoke dị mma maka oge ndị ahụ na mkpokọta mkpụmkpụ mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ na kilomita na kilomita nke ụzọ na-agbagharị. E nwere ụdị ike dị iche iche ole na ole anyị nwere ike ịzụ na igwe kwụ otu ebe mana ugbu a, anyị kwesịrị onwe anyị n'ụzọ My ọkacha mmasị nke mkpụmkpụ, nkọ, na-egbu mgbu, hecklers na-agbawa agbawa nke na-ada ezigbo egwu Chris, gịnị kpatara ị naghị egosi anyị otu esi eme ya? Mgbalị ga-enyere aka na-elekwasị anya na ike kachasị ị nwere ike iwepụ na obere mgbawa. Ezigbo onye na-agba ọsọ dị ka Chris nwere ike ịmepụta ike karịa ụgbọ ala ezinụlọ gị.
Need chọrọ minit 10 ruo 15 nke ikpo ọkụ na ụfọdụ nnukwu ụzọ dị larịị ma ọ bụ na-enweghị ngwongwo pilldrag, mana n'ụzọ ọ bụla, ị ga-agbadata ala ma ịchọrọ ma ọ dịkarịa ala 30 sekọnd nke okporo ụzọ n'efu n'ihu gị mgbe ahụ ọ bụ oge ịmalite mbọ gị mgbe ị nọ ma ọ bụ iguzo dị mkpa bụ na ịmalitere nwayọ ma enwere ihe niile enweghị mmalite ọfụma karịa ije ije na akụrụngwa sara mbara, nke ahụ bụ n'ezie 10 n'ime 10 na-achọpụta oke mgbali, yabụ na ị ga-abanye n'ime ya, ịrụ ọrụ ịgba ọsọ agaghị enwe mmetụta nke ọma ma mgbe 20 gaa 30 sekọnd ị ga-achọpụta na àgwà ndị ahụ na-adaba n'oge ahụ, ị ​​kwesịrị ịkwụsị, ee ma ịchọrọ oge mgbake dị mma nke ihe dị ka nkeji 10 maka mgbake zuru oke ma ọ bụrụ ị nọ n'agbata nkeji 4 na 6 na oge ngwangwa, 6 n'ime mbọ ndị a nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka gị, ka emechara, ịdị mma, ọ bụghị ọtụtụ, bụ ihe anyị na-agba mbọ ugbu a iji hụ na ị nwere ezigbo ezumike ma ị ga-enwe nnọọ uru nnọkọ n'okpuru gị belt Uru ọzọ, n'ezie, bụ na ịnwere ike ịgụnye nke a dị ka akụkụ nke ogologo ụgbọala, ọ bụrụ na ị nwere oge ma nwee ike ịme mbọ ndị a mgbe ị na-anọdụ ala ma ọ bụ na-eguzo, gaa na obere mbọ toro ogologo na m na-adakarịkarị n'etiti oge ahụ, nke m ga-eji maka nke a, mana taa anyị ga-eme nkeji abụọ, ị nwere ike ime atọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi azụ dị ka o kwere mee na pasent 10 ga-adị mma, mana ị nwekwara ike na isi isi ma ọ bụ ọbụlagodi pịa ebe a na-eme njem ma mbọ ndị a dị mma maka ịmịgharị ugwu dị mkpụmkpụ dị iche na agbụrụ ụfọdụ dị ka Asheville yepput na pans line butter si yeah obi ọjọọ na-amalite site na cadence nke gburugburu 50 ugboro ugboro kwa nkeji, nke ahụ bụ n'ezie na ị chọrọ nnukwu gia maka onye ị na-eleghi anya iji mee ngwa ngwa na ụkwụ ka ọ bụrụ na ọ naghị eme ezigbo squats, naanị na ọ dị mkpa inwe mmetụta ahụ maka nkeji abụọ, ma ọ bụ na a ọnụ ọgụgụ nke aghọta ike ịbụ n'etiti itoolu na ọkara na iri, n'ihi na ka emechara, anyị maara ugbu a na ihe ọ bụla n'okpuru nkeji atọ nke mgbalị dị ka nke a mara mma nke kachasị n'oge a ị ga-enwe obi abụọ dị ka akwara dị omimi na-eme ma na-atụ anya na mgbake gị ụdị mgbake ị chọrọ ụdị mgbatị ahụ ma ọzọ ị nweghị ike itinye ya na mkpumkpu dị mkpirikpi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ee na ọnụ ọgụgụ ọla edo nke mbọ ị ga-eme bụ isii dị obere karịa mbọ gara aga anyị tụlere, mana n'ihi nke ahụ , i nwere ike ime nke a aba, ị kwagara na ogologo mgbalị na ndị a bụ ndị m kasị nta họọrọ, ma ọ bụrụ na m na-eme ihe n'eziokwu, ma hey, ha bara uru ka a beụ. Anyị ga-elekwasị anya na ntachi obi gị, yabụ chee ogologo oge ma ọ bụ buru ogologo oge, ọ naghị amasị m ụdị mbọ ahụ, mana enwere m mmasị na ha ntakịrị karịa mbọ dị mkpụmkpụ m na-enye n'ezie 'Ọ dị ka oge bụ na mbọ ọfụma na ịrịgo ma ọ bụ mgbe ịnọ n'elu ụlọ na isi isi, banye n'ọnọdụ ịgba ọfụma, tinye akpụkpọ ụkwụ gị ma ị pụọ, nkeji 10 enweghị iru ala iji nọrọ ogologo oge na igodo dị ala dị otú ahụ, mana jidesie ya ike n'ihi na ọ na-agbakwunye n'ezie na ị na-arụ ọrụ nke ọma na ntinye akwara nke na-enyere aka wulite nkwonkwo akwara gị na mgbatị ndị ọzọ, oge mgbake mechara dị mkpa na ị ga-eme nke a maka ezigbo 1 gaa 3 nkeji na gburugburu 100 ruo 110 rpm na-esote nkeji ole na ole n'ogige nke kachasị maka gị, nke mere na azụ gị ga-arụ ọrụ ahụ gị nke ọma na pedal bike ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido ịchọrọ ịchọrọ abụọ nkeji iri nke mgbalị a ma ọ bụrụ na ọganihu d onye na-agba ya na-eme ya 3 ugboro 15 ma ọ bụ ọbụlagodi 4 ugboro 15 nke 15 4 ugboro 15 soro ya na aha gị ihe dị ka asaa na ọkara ruo asatọ na ọkwa mmega ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị jiri oke nke bụ ezigbo njedebe nke narị afọ mgbe ndị a gasịrị nnọkọ Ọ ga-afọ obere ka m kwado ụbọchị dị mfe n'ihi na nke a ga-eme ka akwara gị gbakee nke ọma na ọ bụ mgbe anyị gbakere, mana ọfụma na a na-arụ ọrụ ọma n'ihe dị ka nkeji 30 ruo 60 na mfe 30 ruo 60 nkeji dị mma ee ugbu a echefukwala ịnye edemede a mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na ị masịrị ya ịkọrọ ya ndị enyi gị chọrọ ntakịrị ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ obere g reat ọzụzụ isiokwu shotout na Amman pịa ebe a
Egwuregwu ịgba bọọlụ ọ bụ ezigbo mgbatị ụkwụ?
Cygba ígwèmma n'ozuzu ọrụ gị ala ahụ na-ewusi gị ikeụkwụakwara n'etinyeghị ha nsogbu. Ọ na-agbado gị quads, glutes, hamstrings, na ụmụ ehi.Ọnwa Mbụ 21, 2020
Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeziwanye ike gị na igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ ọ bara uru ịtụle ịgbakwunye mmemme ọzụzụ gị yana mmemme ike ezubere iche. Phew, emechara, ịgba ịnyịnya ígwè abụghị naanị maka ahụike aerobic, kamakwa banyere nrụpụta ike ugboro ugboro site na pedal. Karịsịa n'oge ikpe.
Phew Taa, m ga - eduzi gị site na mmega ike anọ ga - enyere gị aka ịkwalite ike gị na igwe kwụ otu ebe. Echegbula onwe gị, ọ ga-adị mfe karịa na oge. - Ntem Mark, anyị kwesiri itinye ụfọdụ ibu ugbua? - Ah, echere m na anyị niile ziri ezi n’izu a.
Enwere ike izu na-abịa. Ama m ihe ị na-eche, Mark mara ezigbo mma. Mana achọghị m ibu oke maka triathlon.
Ọfọn, ị gaghị echegbu onwe gị n'ihi na anyị agaghị abụ ndị na-atụba nzuzu taa. Nke a bụ ihe gbasara ịkpụzi ahụ ike. Iji mee ka akwara ndị a rụọ ọrụ nke ọma ma si otú a melite ike anyị na igwe kwụ otu ebe.
Ihe omumu mbu anyi ga-agabiga taa bu akwa akwa ma nwee ike ime ya n’ezi. Ma ọ bụ n'ezie ezigbo ezigbo ọkụ maka ụfọdụ n'ime omume ndị a, ọ na-enweta akwara na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma Ya mere, iji mee nke a, ịkwesịrị ịgha ụgha n'azụ gị n'ala, gbuo ikpere gị ma tinye ụkwụ gị n'ụkwụ ala. Naanị nso nke na ị nwere ike iji mkpịsị aka gị kpoo ikiri ụkwụ gị ka ị na-agbatị aka gị n'akụkụ.
Feetkwụ gị kwesịkwara ịbụ ihe dị ka obosara-obosara. Ọzọkwa gbagọọ aka gị ruo ogo iri itoolu nke na naanị aka gị dị n’elu ụlọ. Mgbe ahụ, gafere ikiri ụkwụ gị na azụ elu iji bulie ịmịiko gị si n'ala.
Gbaa ịnyịnya n'úkwù gị ka ị nwere ike wee pịgharịa glutes gị. Debe bọtịnụ afọ gị ka ọ ghara ịbanye na ya Ugbu a, lekwasị anya na ịga ogologo ma hụ na ikpere gị agaghị ada. Ya mere, ị kwesịrị ị na-eche mmega ahụ site na mmegharị na mkpịsị ụkwụ gị ma ọ bụghị site na azụ gị na-ejide ya wee gbagoo ka ị na-eche na mmegharị ahụ gị na-arụ ọrụ.
Ma mee 15 ugboro atọ ugboro atọ na nke ahụ kwesịrị ịme aghụghọ ahụ. Mana iji mee nke a n'ụzọ dị mma na nke a, ị nwere ike ịme akwa ụkwụ nwere otu ụkwụ n'elu otu ụzọ ahụ i mere maka akwa akwa ahụ wee bulie otu ụkwụ n'ala. Nwere ike ịgbagọ ụkwụ togoro ogo iri itoolu ma ọ bụ tọọ mkpịsị ụkwụ ahụ n'elu ụlọ.
Kpachara anya ka ị ghara ịgbanye ụkwụ ndị ị weliri, ị na-eweli, gabiga ikiri ụkwụ gị na azụ gị elu ma bulie hips elu ka o kwere mee. Ugbu a maka ndị nwụrụ anwụ na nke a nwere ike iji dumbbells ma ọ bụ barbell dị ka nke a. Ọ na-elekwasị anya na quads, hamstrings, ikpere, na hips ka ọ na-eme ka mgbanwe na mmegharị na-eme ka ọ dịkwuo mma na taa, m ga-egosi na ogwe ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-eji dumbbells ọ bụ otu ije.
Ma ị na-ejide dumbbells n'akụkụ gị na ọbụ aka gị na-eche ihu. Ugbu a, ka anyị jiri ogwe aka gafee gị. Ya mere, ụkwụ gị kwesịrị ịdị obosara-obosara, yana ijide gị na mpụga ụkwụ gị.
Enwere ole na ole ị ga - ejide, mana m ga - eji akara ngosi m na - egosi ebe a. Ọ dị mkpa ka ị mee ka azụ gị ghara ịdị na-anọpụ iche site na ịmalite ịmalite site na mmegharị a. E kwesiri ka ubu gi dudo ma sie ike ebe anya gi n’iru ma bulie obi gi elu.
Ka ị na-agagharị na mbuli ahụ, ogwe ahụ kwesịrị ịdịkwu ma ọ bụ na-erughị na kọntaktị gị n'ụkwụ n'ogologo ngagharị. Ọkpụkpụ gị na ikpere gị kwesịrị ijikọ ọnụ iji bugharịa ihe ntụchi ahụ na ala ahụ gaa n'ọnọdụ apata ụkwụ a kpọchiri akpọchi. Mgbe ahụ iji weghachite ibu ahụ na ala, tụkwasa ya n'úkwù gị ma wedata ya.
Kwe ka ikpere gị gbue ntakịrị, na-eme ka ịdị arọ gị dị nso ma wedata ya ruo mgbe ahụ gị fọrọ nke nta ka ọ dịrị n'ala, mgbe ahụ ibu ahụ dara n'ala nkwado wee bido ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa ka ị mee mgbatị a. t bido n’ibu arọ abụọ dị arọ; ma ọ bụrụ na ị na-amalite, ọ bụrụ na ị nwụrụ ma ọ bụ na ị mebeghị ya nwa oge. Mgbe ahụ ọ bara uru ịmalite na naanị barbell na-enweghị oke na njedebe. Mgbe oge na-aga, ịnwere ike ịgbakwunye pound ise ruo iri na njedebe nke ọ bụla n'otu oge.
Anyị na-achọ ime ihe iri na abụọ ugboro atọ. Ibu ibu gị na nsọtụ abụọ kwesịrị igosi oge a. Ọ dị mma nke mere na nke a bụ otu ọkacha mmasị m, ndị Bulgarian kewara squat, nke kachasị mkpa na ọ na-elekwasị anya na ịme otu ụkwụ n'otu oge.
Ihe niile ị chọrọ maka nke a bụ nzọụkwụ, bench, ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ nke ị nwere ike itinye ụkwụ azụ gị ma ọ bụ ụkwụ nke ntị gị nke, dị ka bench a, kwesịrị ikpere ikpere, mgbe ahụ aga m eji obere ibu dị na aka abụọ na-arụ Bulgarian split squat. Ya mere banye n'ime nri ehihie na-aga n'ihu na mgbatị gị ziri ezi, isi ike, na hips na akụkụ aka nri na ahụ gị. Jiri ụkwụ gị laghachi na bench.
Ugbu a, ruo mgbe apata ụkwụ ụkwụ gị fọrọ nke nta ka ọ dị ala, belata ikpere gị n'ahịrị na ụkwụ gị. Ekwela ka ikpere ihu gị na-agagharị na mkpịsị ụkwụ gị ebe ahụ. Drivelaghachi azụ site na ikiri ụkwụ gị gaa ebe mbido.
Tọgharia ma bido ọzọ. Ugbu a ị ga-anwale ntakịrị ịchọta ezi ohere maka nduzi maka ụkwụ gị na ụkwụ gị na bench. Otú ọ dị, isi na-elekwasị anya bụ ijide n'aka na ikpere gị dị n'elu ụkwụ gị, ọ bụghị n'elu ụkwụ gị mgbe ị nọ na ala nke mmegharị ahụ.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịmegharị ugboro iri na abụọ na ụkwụ abụọ. Omume a na-esote ọmarịcha maka ndị anaghị eleghara isi na obliques anya. Ọ bụ Russia gbagọrọ agbagọ.
Ugbu a, na igwe kwụ otu ebe, anyị na-enweta obere umengwụ na akwara anyị. Mgbe akwara isi anyị na-arụ ọrụ dị oke mkpa, ha na-enyere aka ijide anyị nke ọma ma melite ọnọdụ anyị mgbe anyị nọ n'ụgbọ ịnyịnya, ma si otú a belata azụ anyị ma nyere aka mee ka ike anyị dị na igwe kwụ otu ebe, yabụ maka ịmalite mmemme a site n'ịnọ ọdụ na ikpere ikpere gị na ikpere ụkwụ gị n'ala. Mgbe ahụ, gbatịa azụ ka ahụ gị dị n’akụkụ nke ihe dị ka ogo 45 site n’ala.
Jide n'aka idobe azụ gị n'akụkụ a n'oge mmega ahụ ebe ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ ịdọrọ ubu gị n'ihu. Mgbe ahụ, jikọọ aka gị n'ihu obi gị, kpoo isi gị, ma bulie ụkwụ gị n'ala. Ugbu a tụgharịa ogwe aka gị n'akụkụ niile ma mee otu ihe ahụ na ntụziaka ọzọ.
Gụa nke a dị ka otu onye, ​​wee chọọ ngụkọta nke 20 wee megharịa ugboro atọ site na obere nkwụsịtụ n'etiti. N'ezie, ọ bụrụ na ntụgharị ndị Russia gosipụtara na ọ siri ike, ị gaghị enwe ike iwepụ ụkwụ gị n'ala.
Ya mere debe ya n’elu ala n’oge omumu ahụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka o siere gị ike karị, gịnị ma i nwee ntakịrị ibu n'aka gị. Yabụ ị nwere ike iji aka abụọ jide dumbbell na mmega ahụ niile ma ọ bụ jiri ihe dịka bọọlụ ọgwụ dịka m nwere ebe a.
Dika ihe ohuru ohuru, gbaa mbọ hụ na anyị meziwanye ihe omume ndị a ka oge na-aga, nke a pụtara na anyị ji nwayọ nwayọ na-ewulite ọnụọgụ anyị ji na ọnụ ọgụgụ ugboro ugboro anyị na-eji. Ma mgbe isiokwu a lekwasịrị anya na melite ike anyị na igwe kwụ otu ebe. Omume ndị a niile ga-enyere anyị aka ime ka ahụ anyị sie ike.
Ha ga-akwado mmegharị ahụ, ụdịrị mmegharị anyị na otu anyị si ejigide ọnọdụ anyị. N’ikpeazụ ha niile ga - enyere aka igbochi mmerụ ahụ anyị. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, pịa bọtịnụ isi mkpịsị aka ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ site na GTN dị nnọọ pịa ụwa ma denye aha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọzụzụ ike anyị na igwe kwụ otu ebe na ọkachamara triathlete Will Clark, pịa ebe a.
Igwe kwụ otu ebe ahụ ọ na - arụ akwara ụkwụ?
Gba ígwèbụ oké ụzọwuo akwara ụkwụ. Nke ahụ bụ n'ihi enweghị nguzogide nke ịgba ígwè na-ebute. Agbanyeghị, iguzogide ibu ahụ gị, ike ndọda yana ntọala griin dị elunwere ikeenyere gi akairuelu gi na eluakwara ụkwụn'oge ịnyịnya gị. Ihemọzụlụnke na-arụ ọrụ kachasị bụ quads.
Kedu ihe ịgba ịnyịnya ígwè na-eme ụkwụ?
Anọ.Cygba ígwèna-ewuli ahụ ike. Ihe mmegide nkeịgba ígwèpụtara na ọ bụghị naanị ịba abụba: ọ na - ewulikwa ahụ ike - ọkachasị ndị na-amị amị, eriri ụkwụ, quads, na ụmụ ehi. Mkpụrụ ahụ dị arọ karịa abụba, ndị mmadụ nwere oke akwara na-erekwu calorie ọbụlagodi mgbe ịnọ jụụ.Ọnwa Iri abụọ 2, 2020
Bob na Brad ♪♪ Physiotherapists abụọ a kacha mara amara ♪♪ Na Ntaneti ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Anyị niile bụ ndị ọkachamara n'ihe banyere ahụike na Internetntanetị - N'echiche anyị , n'ezie, Bob .- M na-agwa Brad, ị hụrụ nke ahụ, m na-aga ya n'ihu.- Ah, o nwere m! 'Ọ dị ka m na-azụ ọzụzụ - a ga m asị na enwere m nnukwu ederede.
Ee, o nweela, ọ dịka ịkwọ ụgbọ n’azụ ụgbọ mmiri. (chuckles) - Taa, anyị na-ekwu maka ụzọ dị mfe ma otu ahụ ị ga - esi belata ikpere, azụ na mgbu sciatic. - Nke ahụ ziri ezi, Bob. - Dị ezigbo mkpa maka ọnọdụ ziri ezi. - Aka nri, ọtụtụ mmadụ na-ajụ maka ịnya ịnyịnya ígwè na mgbu Sciatic na azụ ka anyị nye azịza ya. - Ọ dị mma.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ iji denye aha. Anyị nwere akụkọ gbasara etu ị ga - esi gbasie ike, kwesịrị ekwesị, ma nwee ihe mgbu, anyị na - ebunye ha kwa ụbọchị. Alsochọrọ ịga na weebụsaịtị anyị bobandbrad.com.
Maka na anyị na-enye ihe mgbe niile, gịnị ka anyị na-enye ugbu a? Anyị amaghị ya. Gaa ma lelee ya. Ha dị mma, mana ha bụ onyinye dị ebube.
Oge ụfọdụ dị ka akwa ụra Ihi ụra, akwa ụra nwere ike ịbụ ụdị ihe ahụ. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịgakwuru Bob na Brad na Facebook, a tụdoro ya na elu peeji ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ ụdị anyị dị mkpirikpi na Twitter na Instagram. Bob, dịkwa mma.
Anyi aga agaa? - Eeh. - Eeh, anyị nwere ike ịkwụsị ịpị pedal nwa oge ka anyị wee nwee ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị okwu nke ọma. Ya mere, ihe kachasị mkpa banyere nsogbu azụ, mgbu ikpere metụtara na ịgba ịnyịnya bụ àgwà.
Ebee? Kpakọba oche ahụ na ala dị ezigbo mkpa, na-aga n'ihu na azụ na-esote, mgbe ahụ, ogo aka gị dị oke mkpa iji wepụ nsogbu ahụ n'azụ gị - ihe anyị nwere ebe a bụ na anyị nwere ọkwa abụọ dị iche iche nke ịgba ígwè ebe a. Anyị nwere igwe kwụ otu ebe na - arụ ọrụ nke ọma, ọ na - abụkarị ndị na - abaghị uru ọgba tum tum, anaghị ekpuchi ọtụtụ kilomita, ga - enwe igwe elekere. Ọ bụghị eziokwu mgbe niile - nke ahụ bụ m - na nke ahụ bụ ọgba tum tum na-esiri ike ịtọlite ​​iji belata nrụgide dị ala na m ga-ekwu maka nke ahụ n'otu oge, anyị ga-abụ, yabụ ozugbo ị gbakọtara igwe kwụ otu ebe maka ịchọrọ iji kpokọta ya nke ọma ma ọ bụghị ya a ga-akpọ ya onye si mba ọzọ. - Nke ahụ abụghị mma? Yabụ ugbu a- - Ana m agwa gị - abughi m ọkachamara na nke a ma ọlị, mana m na-ahụ nke a oge niile ma echere m na ọ na-agba m ara, ọkachasị oche ahụ dị ala. - Aka nri, aka nri.
Oche a dị ala karịa bụ nnukwu nsogbu. Bob, gịnị kpatara na ị gaghị arịgo igwe kwụ otu ebe anyị ga - ekwu okwu - nke mbụ --- ịchọrọ ka m n’ịgba ịnyịnya ígwè gị gosipụta ihe ọ dịka mgbe ị - ee, achọrọ m ihe ole na ole ị ga - ebu ụzọ kwuo. Nweta igwe kwụ otu ebe na onye na-azụ gị, nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma.
Oh, agakwala n'ihu.- Tinye ụkwụ ihu n'ihu na ugwu, ebumnuche ya bụ ime ka igwe kwụ otu ebe gị wee nwee ike ịga axle, a ga m enweta teknụzụ ebe a ugbu a, mana ọ bụrụ na ị maghị, ọ bụrụ naanị nwere onye chọrọ izugbe, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya n'ozuzu, ọ dị mma, anyị nwere nke a. Lee oche ahụ, ọ bụrụ na i lee oche Bob anya, ị ga-ahụ na ọ dịtụ obere.
Ọ bụghị ọkwa na Bob mere mkpesa. Ọ sịrị: ee, ọ naghị ata ahụ. Ọ na-eche mgbe niile ka a na-eme ka ọ daa azụ ma ọ na-adịghị mma na perineal ahụ ma ọ bụ prostate ahụ, nke ahụ nwere ike ibute nsogbu na mpaghara ahụ ma ị chọghị nke ahụ.- Kpọmkwem.- Ya mere, a ghaghị ịba oche a, nke bụ ihe anyị na-eme ugbu a agaghị eme, mana nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ ma emechaa ebe a - enwere m ekele maka ya, Brad.
Enwere m ekele na ị mere mgbanwe ebe a, yabụ - Ya mere kwadebe ihe niile, ugbu a ị banyere, Bob. Ugbu a, anyị edozila ya ka Bob nwee ike isi ụkwụ. Bob nwere, m na-akpọ ha ndị na-eme mkpọtụ, ụfọdụ ndị na-akpọ ha onu mgbe ịnweghị mkpachị ma ọ bụ pịlik na-enweghị aka, mana anyị ga-ebu ụzọ kụọ ụlọ ahụ.
okpu igwe na-agba ịnyịnya
Nke ahụ dịkwa mma maka ihe anyị na-ekwu. Ọ dị mma, Bob, gịnị kpatara na ị gaghị agbada ụkwụ iji nọrọ ọdụ. Ya mere tinye bum gị na sadulu ka ọ wee daa ma ọ bụ nwee ahụ iru ala, ebe ahụ ka ị na-agakarị? - Right, nri - Na na na.
N'ime ụwa na-agba ịnyịnya ígwè a na-akpọ nke a sadulu. Mgbe m kwuru ịnọdụ ala, ha na-ekwu ihe ịnọdụ ala, enweghị echiche? - Aka nri, aka nri. - Agbanyeghị, ka anyị gbadata 6:00 ọnọdụ na na pedal, ị chọrọ nke a --- m na-n'ezie na-alaghachi a obere n'ihu, nri? - Nri. - Ka a pụọ. - The axle, ị nwere ike Bulie ụkwụ gị? - Ee.- Ogwe aka nke pedal kwesịrị ị kwụ n'ahịrị na mpaghara gị, ebe ahụ, ndị buru ibu, m na-agagharị na bọọlụ ụkwụ.- Sure.- N'aka ebe mkpịsị ụkwụ jikọọ ma ị nwere nkwonkwo ndị a, nke a bụ ọnọdụ ziri ezi maka ụkwụ na pedal. Ọnọdụ 6: 00, ụkwụ na ọkwa ala, yabụ ee, ị nwere ike ihulata dorsa gị, Bob? Eeh, nke ahụ ga-abụ ụzọ pere mpe, ma ọ bụrụ otu a, gbagoo ebe ahụ ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ nke ọma, ka anyị mee ya nke ọma ma anyị leba anya na ikpere ikpere.
Ugbu a, agala m onye klaasị-kụziri klaasị --- ọ dị n'azụ gị, Brad.- M tinye ya ebe ahụ ka m wee ghara ile anya - (Bob na-achị ọchị) Ndị na-ahụ maka ahụike na onye na-ahụ maka ọmụmụ ihe, ha dịkwa ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, mụọ nke a nke ọma h, ha bụ ndị ọkachamara kachasị mara na ndị maara ihe n'ọhịa, ha wee sị n'agbata itoolu na 14 ogo nke ikpere ikpere bụ ogo ziri ezi. Ugbu a ọ bụrụ na anyị elee Bob anya, amaara m na ịnweghị goniometer, mana ị nwere ike ịgafe na-enweghị ya.
Ọ bụrụ na m tụọ ya ugbu a, ọ nwere ogo 50 nke mgbatị ikpere. - Chaị. - O doro anya na oche dị oke ala.
Ikpere a ga-etinye nnukwu nsogbu karịa oge. Ya mere, ị gaghị ebili Bob. Igwe a mara mma n'ihi na oche dị mfe ịgbanwe, aga m agbago ihe dị ka anụ ọhịa na ọkara, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka edemede.
Ọ na-abụkarị na ị ga - apụrịrịrịrịrịrị mpịpị wee mee nke ahụ. Ugbu a laghachi na pedals, Bob. Feel na-eche nnukwu ọdịiche? - Ehee. - Ma anyị ga-ahụ na ị nwere ike ịdị oke elu. - Ọ nwere ike, ọ dị m ka ọ fọrọ nke nta ka m ruo ọgwụgwụ.- Bịanụ, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ị gbadata aka metụ pedal ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị oke elu.
Kedu ihe mere na ị gaghị apụ ọzọ na 6: 00 ụtụtụ Ee, enwere m ike ịhụ na ị dị elu.
Rutere na ihe na-aga azụ na-apụta, ee, ị nọkwa n'okpuru ogo itoolu. Ka anyị hapụ gị ntakịrị ma agaghị m etinyekwu oge na ya, mana nke ahụ bụ echiche ahụ. Ọ DỊ MMA.
Ya mere ị nwetara oche ahụ n'ụzọ ahụ, ị ​​nwetara elu - - Ugbu a ọ na - adị - Ọ dị ka anyị dị nso - Ọ na - adịkwa n'ihi na ị kwada ya dị ala bụ. - Nri. - Na ị hụrụ ọdịiche. - Ee, ee- - O di mma, ya mere.
Ọzọ anyị ga-aga ọnọdụ 3:00, ya bụ, 12:00 dị ebe a, ugbu a anyị nọ n'ụkwụ atọ, anyị kwesịrị ịlele ma oche ahụ kwesiri ịga n'ihu ma ọ bụ azụ. Ihe kacha arụ ọrụ nke ọma bụ na ị na - eji pọmpụ kwụ ọtọ, yabụ enwere m obere bọmbụ ebe a. Anyị ga-ekokwasị ya na ikpere ma ọ bụ ikpere, ị nwere ike ijide ya, Bob? - Chọpụta. - Gaba, daalụ, zuru okè.
Wepu nke ahụ n'ụzọ. You hapụ ya ka ọ dajụọ, mgbe anyị lere ya anya, ị na-anọdụ ala n’ebe ọ dị gị mma? , mgbe mgbe, m ga-adị otú ahụ. Ọ dị mma ebe a. - Ọ dị mma.
Yabụ ọ nọ n'oche ma anyị ga-ahụ nke ahụ. Ugbu a n'ọnụ ọnụ boumb pọm ahụ kwesịrị ịgbakọ na axis nke pedal, nke dị ebe a. Yabụ oche ya ga-ebugharị inch ka ọ ga-erule oge anyị gafere isiokwu a.
yoga postures maka ụmụ nwoke
Aga m ebugharị oche ahụ n’ihu ma mezie ya ka anyị nwee ike inweta ọnọdụ a n’ụzọ ziri ezi. - Magburu onwe. - Ugbu a, anyị emeela oche ahụ.
Nwere igbe nkpuchi. - Gotcha.- Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ ya, nke ahụ bụ ihe m masịrị ịkpọ ya.
Na nke na-esote bụ azụ. Kedu ka anyị kwesịrị isi mee ka nrụgide anyị pụọ n'azụ? Igwe igwe elliptical nwere ụdị njikwa nwere ike bụrụ ihe kachasị mma ugbu a iji belata nrụgide azụ. Have nwere azụ mgbu ma ọ bụ sciatica, nke na-eme ka ị kwụrụ ọtọ, ọ dị mma.- Ee, ị chọghị ịdị ka nke ahụ.- Kpọmkwem, kpọm kwem.
Ezigbo.- Amaghị m ihe m dị ka ya? Ahụ m? - look dị ebube, Bob. - Ekwuru m, mmata ahụ m bụ - Oh mba, achọghị m ịgwa gị eziokwu, mana ọ bụrụ na nwunye gị na-ele gị, ị mara.
Ya mere enwere ike idozi elu ebe a ị nwere ike ịtọpụ nke ahụ, ma n'ezie, ọ bụrụ na ọ dị elu, ọ ga-ewelata nrụgide n'azụ ya, ee, ọ ga-adị oke ka o kwere mee.- Echere m na m dị elu ka ọ na-enweta .- O nwere ike ịbụ, ọ dị ezigbo mma - ma ị nwere nke dị mma, ee, n'ihi na enwere ike ịtọ ebe a, - Oh, nke ahụ bụ - - N'olu-- Nke ahụ edoghị m anya.- I nwere mgbanwe abụọ dị iche iche, aka nri.
Ma ị dịkwa elu dị ka ị nwere ike. Ọ nwere ike ịga obere elu. Ugbu a ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye na-agba ịnyịnya ígwè, ị na-eche banyere ọsọ ma na ịchọrọ ịbelata azụ mgbu, ha anaghị adaba.- Right.- Ebe ọ bụ na ị dị ka ụgbọ mmiri, ị ga-ejide ifufe, ọ ga-akwụsịlata gị , ma na ị ga-achụ àjà maka azụ gị. - O ziri ezi, na naanị m nchegbu bụ ịnọgide na-enwe m azụ ike y.- Nke ahụ bụ otú m.
Amaara m na site na igwe kwụ otu ebe m ebe a, etinyegoro m n'ụgbọ ịnyịnya, ọ na-enye nrụgide karị maka azụ m. Ọ bụrụ na ị lelee anya ebe a, enwetara m onye na-arụ ụgbọ ala ka m wee mee nyocha ọzọ na ọkara dị elu karịa ka ọ na-eme ka ọ daa mbà, mana agbanyeghị, ọ bụ etu m si arụ ọrụ. Na oge ụfọdụ m ga-aga karịa elu ma ọ bụ nweta igwe elliptical, ọ dabere na azụ m na-eche ka m banyere 80s na 90s. (Ọchị) Enwere m nchekwube ugbu a! - Atta nwata, enyi! Ọ masịrị m! - Ya mere pụọ, Bob.
Kwụpụ, ọ dị mma. Ya mere e guzobere igwe kwụ otu ebe na Bob ga-agabiga otu ihe ọzọ gbasara mgbu na nkasi obi zuru oke na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ị nwere igwe kwụ otu ebe, ọ dị mma, enwere m aerobars na m n'ihi na m na-eme triathlon, na mgbakwunye, enwere m mmasị na ya.
Mgbe ị nwetara ya mkpịsị aka gị na-akụda ma ị nọ na dobe ma ọ bụ ihe dị na mkpuchi, ma ọ bụ na ị nọ ebe a na aka nri m na-amalitekarị ịda ụda. na akwara ahụ, n'ihi ya, m banye n'ọnọdụ ahụ ma jide ya ebe ahụ. O siri m ike ntakịrị n’azụ m, ma ọ na-ewe m ụfụ na aka m.
M na-agakarị n'elu ụlọ dị ka nke a, enwere m mmetụta nke ọma karịa na azụ m. Na-eme ka ifufe jiri nwayọọ belata m ma azụ m na-adị mma karịa n'oge a, ana m aga ogologo oge, aga m echekwa azụ m wee rụọ ọrụ ya ebe a. Ya mere, Bob, ọ bụkwaghị ajụjụ ị bụ? - Ee e, mana enwere m ike ikwu ugbu a na oche m kwesiri ịga n’ihu.
N'ihi na m bụ, iji mee ka azụ m kwụ ọtọ ọzọ, m nọ na mkpịsị aka m, yabụ --- Ee, ọ dị mma - ọ dị m ka ọ bụrụ na ị bụ ugbu a ị tụrụ aka, nke a enweghị obi iru ala! - Ee! Ga-ejedebe na nsogbu prostate. Ọ bụrụ na i kweghị - Ee, m ga-anọ ebe a- bụrụ abụ soprano. - Yabụ, echere m na anyị kpuchie ya, Bob. - Ee, dị ezigbo mma. - Ihe na-ama ezigbo mma yabụ melite igwe kwụ otu ebe gị nke ọma, agbagola na-ekwesịghị ekwesị, ma nwee ihu igwe. (Uda) Oh Bob, nke a bụ --- Obi dị m ụtọ na ị dị otu a, m ga-edozi igwe kwụ otu ebe, aga m anọ n'ọnọdụ dị mma - Ọ dị mma, anyị ga-asịkwa ọma ugbu a - Ọ dị, Adios! - Na na ị nwere ike nzọ.
Bikgba ígwè ịgba ọsọ ụkwụ gị ọ bụla
Ihe calorie na-ere makaịgba ígwèenyere akaebughibunke giụkwụ, n’agbanyeghi na igba oku calorie n’ahu gi niile. Iji hụ na ị na-eji akwara ụkwụ gị maka ntachi obi - nke na-ebelata abụba - na-agba ọsọ ọsọ n'etiti mgbanwe 80 na 110 kwa nkeji (rpm). Nke a bụ pụtara ngwa ngwa.Jun 6, 2019
Cycgba ígwè nwere ike dochie ụbọchị ụkwụ?
Ee, na-agba mgbatịigwe kwụ otu ebema ọ bụ na-ewere ogho klas otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu ga-enyere aka na-ewuli ahụ ike naụkwụ. N'ihi iguzogide etinye na-agba ịnyịnya aigwe kwụ otu ebena mmetụta efu, iheụkwụakwara na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ nke ọzụzụ iguzogide ihe dị arọ ga-arụmee.Eprel 20, 2018
Mgba ịnyịnya ígwè ọ̀ ga-ada ụda n’ụkwụ m?
Cangba ígwè nwere ikeEnyemakaụda ụkwụ,apatana butto
Yana ịgba mmiri na igwu mmiri,ịgba ígwèbụ otu n'ime ihe omume kacha mma aerobic; yagaike na ịzụliteụkwụnkwonkwo na akwara nanwere ikeenyere gị aka ida abụba onapatanaụmụ ehi.Ọgọst 11, 2011
Gịnị kpatara ụkwụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji nwee anụ?
Ndị siri ike ịgba ịnyịnya ígwè na-enwekarịukwuobere abụba. Bikzọ ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ na-akwụsi ike, mgbatị ahụ, ogologo oge. Kinddị mmega ahụ na-ere ọtụtụ abụba.Ya mereị na-ahụ ndị na-agba ọsọ ogologo na ndị na-agba ụkwụ n'okporo ụzọ bụdị ezigbo mkpa.
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ na-agbatị apata ụkwụ ime ime?
Cygba ígwèbụ ezigbo ụzọ iji dobe ibu si na gịapata ụkwụ imen'ihi na ọ na-ere calorie. Ikwesighi ịgba ịnyịnya gịigwe kwụ otu eberuo ọtụtụ awa n'otu oge iji hụ uru, mana gịmeekwesiri ịrapara na oge mgbatị oge.
E lere ịnya ịnya bọs dị ka ụbọchị ụkwụ?
Mee ka a mara na ịnweghị ike “dochie”ụbọchị ụkwụ. Ee, na-agba mgbatịigwe kwụ otu ebema ọ bụ na-ewere ogho klas otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu ga-enyere aka na-ewuli ahụ ike naụkwụ.Eprel 20, 2018
Ndi igwe kwụ otu ebe dị mma karịa squats?
Get nwetammana ihe omume ị na-eme, ya mere nọkwasị aigwe kwụ otu ebebummaọzụzụ makaịgba ígwè karịa squat. Mgbe o kwusịrị nke ahụ, a ghaghị iwulite ike n'usoro malite site na ibu, na-aga n'ihu site na mgbago elu / na-eguzogide elu ugwu, na-ejedebe na ọzụzụ nkeji oge na 90-110 rpm.
Bụ ụkwụ na-aga itule bike maka ụmụaka?
Legkwụ & amp; gaa igwe kwụ otu ebe bụ zụrụ zuru oke maka nwa m. Ọ dị ntakịrị na mbụ, mana n'oge na-adịghị anya, ọ bịara nwee ntụsara ahụ ya na igwe kwụ otu ebe, ma mesịa mụta ịgba ịnyịnya ọsọ ọsọ.
Ọ bụ eziokwu na ịgba ígwè na-ewulite mọzụlụ ụkwụ?
Ndi cgba Buildgba Buildgba Buildgba Egwu Nwa Ehi? Ee, mgbe quads na hamstrings akwara nwa ehi bụ onye na-erite uru ọzọ, kpọmkwem gastrocnemius na soleus na nwa ehi ahụ. Olee Otú M Ga-esi Mee Nnukwu Mkpụrụ Legkwụ? Differentdị ịnya ịnya dị iche iche na-eme ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ịgbagharị oge niile na ịgba ọsọ siri ike ga-enye gị akwara ụkwụ ụkwụ.
Kedu otu esi enweta ụkwụ ukwu na igwe kwụ otu ebe?
Ọzụzụ siri ike na igwe kwụ otu ebe dị oke mkpa ka ọ na-ewe akwara ndị ị kwesịrị ịrụ ọrụ na oge kpụ ọkụ n'ọnụ mgbe ị na-eme egwuregwu ị họọrọ. Mgbalị ndị buru ibu bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ a na-akpọ ebe a - ọkachasị mbido, nke gụnyere ịbịaru ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị, wee gbaa ọsọ megide nnukwu nkwụsi ike ị nwere ike ịchọta.